Kenyatta oo hoggaanka haya iyo Odinga oo qaaddacay natiijada hordhaca ah ee doorashada – War La Helaa Talo La Helaa
Home » MUUQAALLADA » Kenyatta oo hoggaanka haya iyo Odinga oo qaaddacay natiijada hordhaca ah ee doorashada
09/08/2017	322 Views
Hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya, Raila Odinga oo qaadacay natiijada hordhaca ah ee doorashada, iyadoo weli ay socoto tirinta codadkii la dhiibtay. Raila wuxuu sheegay in aysan ku qanacsaneyn qaabka ay wax u wadaan guddiga doorashada.
Inkasta oo mas’uuliyiintu gudiga doorashada ay xaqiijinayaan in doorashadu si cadaalad ah u dhici doonto hadana Raila Odinga ayaa walaac ka muujiyay shakiga laga qabo hufnaanta hanaanka codbixinta ee electronigada.
Todobaaadkii lasoo dhaafay masuul sare oo ka mid ah madaxda gudiga doorashada ayaa la helay meydkiisa iyada oo aan la faahfaain sababaha dhaliyay dilkiisa.
Madaxeynihii hore ee Mareyknakna Barack Obama ayaa sheegay in muran kasta oo ku xeeran doorashada loo xaliyo si nabad ah, iyada oo loo marayo hey’adaha waddanka iyo sharcigaba
Meelaha qaar dadku waxay billabeen inay safka galaan 1-dii habeenimo inkastoo ay codbixinta si rasmi ah u billaabatay 6-dii arroornimo.
Dadka Kenyanka ah ayaa waxa ay u codayn doonaan 6 jago laga soo billaabo madaxwaynaha ilaa golaha wakiilada degmooyinka.
Dadkaas codeeyay waxaa ka mid ah Mdaxweyne Kenyatta iyo Odinga
Lahaanshaha sawirkaAFPImage captionKenyatta ayaa ku baaqay in dalku uu midoobay
Lahaanshaha sawirkaEPAImage captionOdinga ayaa shaki ka muujiyay in uu cabsi ka qabo in lagu shubto
Macluumaad ku saabsan doorashada
Doorashada guud ee Kenya ayaa wax ka qaybgalaya musharaxiin kor u dhaafaya 14,000 qof oo u tartamaya jagooyiinka kala duwan.
Boqolkiiba 45 ka mid ah dadka doorashadan Kenya codaynaya waxa ay da’dooda ka hoosaysaa 35 jir.
Tirada goobaha codadka laga dhiibanayo ayaa waxa ay dhan tahay 1451 xarumood .
Dhanka ammaanka waxaa loo diyaariyay in ay sugaan 180,000 oo askeri oo sugi doona ammaanka xilliga doorashada iyo ka dib ba.
Laakiin sida ay aragtida codbixintu saadaalinayso labada murashax ee Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga aad ayay isugu dhaw yihiin, taas ayaa keenaysa baqdinta ah in dhibaato dhacdo.
Hadba sida uu u guuleysto hannaanka codeynta ee computer-da ee guddiga madaxabannaan ee doorashooyinka iyo xuduuddaha (IEBC) ayaa muhiim u ah in loo arko doorashadan in ay ku dhacday si xor iyo caddaalad ah. Haddii hannaankan uu guuldaraysto sidii dhacday 2013, waxa codadka lagu tirin doonaa gacanta, taasina waxay wadanka u horkici doontaa si aan shaki ku jirin in qofka laga adkaado uu dood ka keeno natiijada.
Previous: Beesha Murusade 90-kun Oo Dollar Diyo Ahaan U Siisay Habar Yoonis, Iyo Sheekadii Kaaliyaha Maxkamadda Oo Halkaas Ku Soo Xirantay
Next: Dalka Kenya Oo Qarka U Saaran In Uu Dagaal Sokeeye Lugaha La Galo Kaddib Doorashada, Haddii Ay Dhacdo Hal Arrinta (Akhriso)